Govt Allocates Additional K100 Bln asaStimulus Package | Myanmar Business Today
HomeBusinessGovt Allocates Additional K100 Bln asaStimulus Package
The government of Myanmar has allocated additional K100 billion for the COVID-19 Fund to provide credit to businesses affected by the COVID-19, according to the Ministry of Planning, Finance, and Industry.
This additional K100 comes from the K150 billion surplus of the 2019-2020 budget. The remaining K50 billion will go to the social security fund, from which K50 billion was deducted for the COVID-19 Fund when it was found.
This time, the stimulus package will target CMP business, hotels and tourism businesses, and SMEs. This is the second round of providing credit to relieve the economic impact of the COVID-19. The government will earmark the K100 billion to the fund in three batches: K35 billion twice and K30 billion once.
The Working Committee to Address the Possible Impacts of COVID–19 on the Country’s Economy will announce the criteria and eligible business for the relief credit.
COVID-19ကြောင့် ထိခိုက်သည့်နစ်နာမှုရှိသော လုပ်ငန်းများအား ဘဏ္ဍရေးဆိုင်ရာ အကူအညီ ဆက်လက်ပေးအပ်နိုင်ရေးအတွက် နိုင်ငံတော်မှ COVID-19 Fund သို့ ကျပ် ၁၀၀ ဘီလီယံ ထပ်မံဖြည့်တင်းပေးမည်ဟု စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ထားသည်။
ယခုတစ်ကြိမ်သည် ဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်ကာ COVID-19 ကြောင့် ထိခိုက်သည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ကုစားရန် အစိုးရက လက်ခစားလုပ်ငန်း(CMP)၊ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွား လုပ်ငန်းနှင့်အသေးစား၊ အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်း (SME) များကို ပထမအကြိမ် ချေးငွေ ကျပ်ဘီလီယံ ၁၀၀ ထုတ်ပေးခဲ့သည်။
ဒုတိယအကြိမ် ရန်ပုံငွေကို COVID-19 Fundသို့ ဖြည့်တင်းရာတွင် သုံးကြိမ်ခွဲ၍ ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး ပထမအကြိမ် ကျပ် ၃၅ ဘီလီယံ၊ ဒုတိယအကြိမ်တွင် ကျပ် ၃၅ ဘီလီယံနှင့် တတိယအကြိမ်တွင် ကျပ်ဘီလီယံ ၃၀ ထုတ်ပေး မည်ဖြစ်သည်။
COVID-19 Fund မှ ဆက်လက်ထုတ်ချေးမည့် ချေးငွေများအတွက် ချေးငွေလျှောက် ထားနိုင်သည့် လုပ်ငန်းအမျိုးအစားများ၊ ချေးငွေအတိုးနှုန်းနှင့် ချေးငွေသက်တမ်းစသည့် ချေးငွေစည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်များကို Coronavirus Disease 2019 ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် စီးပွားရေးသက်ရောက်မှုများအပေါ် ကုစားရေးကော်မတီက ထုတ်ပြန်ကြေညာမည်ဖြစ်သည်။
ကျန်ကျပ်ဘီလီယံ ၅၀ ကို ပထမအကြိမ် ရန်ပုံငွေ ထူထောင်စဉ်က ယူသုံးခဲ့သည့် လူမှုဖူလုံရေးရန်ပုံငွေသို့ ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးမည်ဟု မံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် စီးပွားရေး သက်ရောက်မှုများအပေါ် ကုစားရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ အစည်းအဝေး (၅/၂၀၂၀) ဆုံးဖြတ်ချက်အရ ချေးငွေလျှောက်ထားသည့် လုပ်ငန်းများအနက် ဆဌမအသုတ်အဖြစ် (၂၀၇၈) ခုသို့ ခွင့်ပြုငွေပမာဏ ကျပ် (၄၉.၁၁၆) ဘီလီယံကို COVID-19 Fund မှဇွန်လ ၁၅ ရက်နေ့က ချေးငွေထုတ်ယူ ခွင့်ပြုထားသည်။
Previous articlePoverty Drops by 50%; Vulnerability Remains an Issue
Next articleFood & Agriculture System to Be Implemented Across the Country